Dowladda ayaa wadahadal kula jirta Mukhtaar Roobow oo ay ka hor istaagtay xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed – XOGMAAL.COM
Dowladda ayaa wadahadal kula jirta Mukhtaar Roobow oo ay ka hor istaagtay xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed
Dhinacyada ka socda Dowlada Dhexe iyo Mukhtaar Roobow ayaa waxaa ay lafa gurayaan Go’aanka ka soo baxay Wasaarada amniga Xukuumada Soomaaliya, kaasi oo ku aadan in Roobow uusan xil ka qaban Karin Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya iyo arimo kale.
By Soomaaliya	 On Oct 7, 2018
Warar ay heshay Idaacada KNN ayaa sheegaya in Kulan aan loo kala kicin xalay ilaa saakay uu ka soconayo Magaalada baydhabo, kaasi oo u dhexeeya Mukhtaar Roobow Cali abuu Mansuur iyo taliyaha Nabad Sugida Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen.
Taliyaha Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka iyo Roobow ayaa waxaa ay ka wadahadleen arimo ku saabsan xilka uu isku sharaxay Mukhtaar.
Wadahadalada ayaa waxaa qeyb ka noqdayFowziya Maxamed Sheekh oo ah Gudoomiyaha Guddiga amniga ee Golaha Shacabka.
Kulanka ayaa hada waxaa uu ka soconayaa hotel uu Roobow ka degan yahay Magaalada Baydhabo, Waxaana halkaasi ku sugan Ciidamo aad u fara badan oo ilaalo u ah Sheekh Mukhtaar Roobow.
Dadka ka agdhow Mukhtaar Roobow ayaa sheegay in weli wadahadlada ay ka socdaan Baydhabo, islamarkana wararka waxaa ay sheegayan in xildhibaano ka tirsan koofur galbeed ay qeyb ka yihiin kulanka.
Akhriso: Wasiir ka tirsan xukuumada Kheyre oo u tartamaya kursi ka banaan Golaha Shacabka
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya oo ka mid noqday golaha shacabka Soomaaliya